Hlela kwakhona, Phinda ubhale kwaye uthathe umhlala phantsi | Martech Zone
Hlela kwakhona, Phinda ubhale kwakhona kwaye uthathe umhlala-phantsi
NgoLwesihlanu, Novemba 21, 2014 Douglas Karr
Kuhlala kunesidingo esikhulu semixholo emitsha uninzi lwethu olunobunzima bokuqhubeka nokubhala umxholo onyanzelisayo onika ixabiso kubaphulaphuli bethu. Oku infographic evela kuMarketo ekugcineni umxholo omkhulu yingcebiso eqinisekileyo.
Hlela kwakhona -Ndinokusebenzisa ukuphindaphinda njengekota yoku, kodwa sihlala sisebenzisa uphando, amabali kunye nemizobo kunxibelelwano oluninzi njengoko siphuhlisa umxholo. Sinokwenza uphando nge-webinar, kodwa kwakhona sibhale iphepha elimhlophe elihamba kunye nommeli we-infographic kunye neposti yebhlog ukubakhuthaza. Ayinguye wonke umntu owetyisa umxholo ngendlela efanayo, ke ukubalisa ibali lakho kunye nokuzilolonga kubo bonke oonozakuzaku kusebenza ngokukuko.
Phinda ubhale -Sinezithuba ezithile kubuchwephesha obuye bavela ngokwenene. Endaweni yokubhala iposti entsha kwimveliso yendalo, ngoku siphucula iiposti zakuqala kwaye sizihlaziye. Kukho inzuzo enkulu yokwenza oku-ngokugcina ukuthembeka kwe-URL, izibalo zokwabelana ngokwasentlalweni zinokongezwa kwaye iinjineli zeinjini yokukhangela azinakugcinwa kuphela, kodwa ziphuculwe ukuba iposti yenziwe kakuhle!
Umhlala phantsi - le yayinzima, kodwa siyenzile. Sasinokuba lula ngaphezulu kwezithuba ezingama-5,000 1,000 kule ndawo kodwa ngokulula sasinezithuba ezili-XNUMX XNUMX ezazingabalulekanga okanye zazingasasebenzi ngokupheleleyo. Ezinye yayiziziganeko zakudala, ezinye zazingabasebenzi beetekhnoloji eziphelelwe lixesha, kwaye ezinye yayiziimveliso ezingasekhoyo. Inyaniso yokuba uthathe ixesha ukubhala into ukuyicima kamva izisa iinyembezi kancinci ... kodwa kungcono ndibeke umxholo wam ujolise kwizihloko ezisabalulekile.
Ezi zicwangciso beziyinxalenye yenkqubo yolondolozo esiyiqalileyo nesiphumo sayo ukugcwala kwezinto eziphilayo ngonyaka ophelileyo. Unokucinga malunga nokuba ungasiphuhlisa njani isicwangciso sokugcina indawo yakho eqinisekisa ukuba wonke umxholo wakho ulungile kwaye ufike ngexesha!
tags: ukugcinwa komxholouphawuuphawu lwe-infographichlela umxholouthathe umhlala-phantsiPhinda ubhale umxholo
Imibuzo emi-7 yokuyibuza iArhente yakho ngaphambi kokuba utyikitye